Football Khabar » इबिजासँग बार्सिलोनाको प्रदर्शनबाट प्रशिक्षक ‘फायर’ : खेलपछि के–के भने ?
इबिजासँग बार्सिलोनाको प्रदर्शनबाट प्रशिक्षक ‘फायर’ : खेलपछि के–के भने ?
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले कोपा डेल रे फुटबलको अन्तिम ३२ मा तेस्रो श्रेणीको टिम इबिजालाई उसकै घरमा १–२ ले हराउँदै अन्तिम १६ मा पुग्यो । तर, स्टार खेलाडी लिएर अवे मैदानमा उत्रिएको बार्सिलोनालाई आफूभन्दा निकै कमजोर तेस्रो डिभिजनको टिमलाई हराउन पनि फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको थियो ।
खेलमा पछि परेर कमब्याक जित दिलाउन २ वटै गोल फ्रेन्च फरवार्ड एन्टोनी ग्रीजम्यानले गरे । खेल १–१ को बराबरीमा सकिएर थप ३० मिनेटमा जाने अवस्थामा ९४औं मिनेटमा ग्रीजम्यानले बार्सिलोनाका लागि विजयी गोल गरेपछि ला लिगा लिडरले ९० मिनेटमै कठिन जित निकाल्यो ।
सो खेलपछि बार्सिलोनाका नयाँ प्रशिक्षक क्विके सेटिन भने आफ्ना खेलाडीको प्रदर्शनबाट निकै असन्तुष्ट भएका छन् । खेलपछि मिडियासँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले बार्सिलोना अन्तिम १६ मा पुगे पनि स्तरअुसारको जित नभएको भन्दै बेखुसी पोखे । उनले हालको अवस्थाजस्तो बार्सिलोना टिम आफूले नचाहेको भन्दै आक्रोश पनि पोखे ।
‘नढाँटी भन्दा म यो स्तरको बार्सिलोना टिम चाहँदिनँ । र, मन पराउँदिनँ । मैले यस खेलका लागि अर्कै योजना बनाएको थियो, खेलाडी अर्कै तरिकाले चले,’ सेटिनले भने, ‘सुरुआती १५ मिनेटको खेल सकिँदा मलाई हामी हार्न सक्छौं भन्ने लागिसकेको थियो । तर, अन्तिम समयमा जित्यौं ।’
सेटिनले इबिजाको १ गोल रद्द हुनु र एक प्रहारमा पोलमा लागेर फर्किनु बार्सिलोनाका लागि भाग्यको कुरा भएको बताए । ‘उनीहरूको दोस्रो गोलले मान्यता नपाउँदा हामीमाथि दबाब बढ्न पाएन । दोसो हाफमा उनीहरूको एक प्रहार पोलमा लागेर फर्किंदा खेल हाम्रा लागि जीवित रह्यो । यी दुवै चिज भएका थिए भने हामी बाहिर जान्थ्यौं,’ सेटिनले भने ।
सेटिनले इबिजाका खेलाडीले आफ्नो मैदान र दर्शकसामु आत्मविश्वासका साथ खेल्दा आफ्ना खेलाडी मानसिक रूपमा दबाबमा परेको बताए । ‘एक त यो मैदान निकै कठिन थियो । तर, उनीहरूका लागि अभ्यस्त । त्यही भएर पनि उनीहरूले हामीवरुद्ध विश्वासका साथ खेल सुरु गरे, हामीलाई दोस्रो मिनेटबाटै दबाबमा राखे,’ सेटिनले भने, ‘बार्सिलोनाजस्तो टिमका खेलाडी तल्लो श्रेणीको टिमसँग मानसिक रूपमा दबिएर खेल्नु ज्यादै ठूलो कमजोरी हो ।’
सेटिनले इबिजाविरुद्धको खेलबाट आफूले बार्सिलोनाको कमजोरी पत्तो पाएकाले अबका दिनमा व्यापक सुधार हुने बताए । ‘हामीले थुप्रै गल्ती गर्न पुग्यौं, जसको फाइदा उनीहरूलाई पुग्यो । यो खेलपछि मलाई मेरो टिम र खेलाडीको कमजोरी थाहा भयो,’ सेटिनले भने, ‘आगामी दिनमा हामी यसमा व्यापक सुधार गर्नेछौं ।’
सेटिनले इबिजाले बार्सिलोनाको जस्तो खेल खेलेको भन्दै तारिफसमेत गरे । ‘इबिजा टिमको म तारिफ गर्दछु । उनीहरूले एक शानदार खेल खेले, जुन हाम्रा लागि ज्यादै कठिन भयो,’ सेटिनले थपे ।
प्रकाशित मिति ९ माघ २०७६, बिहीबार १३:४६